21VPN - Android အတွက်အကန့်အသတ်မရှိ & အခမဲ့ VPN APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » 21VPN - Unlimited & အခမဲ့ VPN ကို
21VPN - Unlimited & အခမဲ့ VPN ကို APK ကို
VPN ကို (Virtual Private Network) သငျ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို forward နိုင်သည့်မှတဆင့် Tor proxy (အဆိုပါကြက်သွန်နီ router များ) ကိုအလားတူကမ္ဘာတဝှမ်း 21VPN ပိုင်ဆာဗာများ, တစ်ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည် VPN ကိုချိတ်ဆက်ထားလျှင်, သင်၏ဆက်သွယ်မှု encrypted ဖြစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာတစျခုမှပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ အဲဒီ server ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်နှင့်သင် app များကိုဖွင့်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖွင့်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
ကျနော်တို့အမေရိကန်, ဗြိတိန်, ယူကရိန်း, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပိုလန်, ဂျာမနီ, နယ်သာလန်, လတ်ဗီးယား, ပြင်သစ်, ဂျပန်, စင်ကာပူနှင့်ပိုပြီးဥပမာကမ္ဘာတဝှမ်းတည်ရှိသော VPN ကို proxy ကိုဆာဗာများ, ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့် Android အတွက် 21 VPN ကို?
► အခမဲ့ VPN ကို - မယ့်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူအခမဲ့ VPN connection ကိုရယူလိုက်ပါ
► အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်း - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းထက်တာဘို VPN ကိုဆာဗာန့်အသတ်အမြန်နှုန်းခံစားကြည့်ပါ
► လုံလုံခြုံခြုံ VPN ကို - အပြင်းထန်ဆုံး encryption ကိုနည်းပညာနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကို encrypt IKEv2
► ငါ၏အ IP ကို ​​Hide - သင့်အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ် ISP က၏မျက်စိ prying ရှေ့၌သင်တို့လှုပ်ရှားမှုများ Hide
► Apps ကပပြန်ဖွင့် - ပတ်ပတ်လည်တင်းကျပ်ကျောင်းသို့မဟုတ်အစိုးရ firewall ကများနှင့်လိုင်း, WeChat, Messenger ကိုသို့မဟုတ် Facebook နဲ့တူ access ကို app များကို Get
► Website များပြန်ဖွင့် - Netflix နဲ့တူသောက်ဘ်ဆိုက်များကိုပြန်လက်ခံရန်, မပို "XYZ သင့်ရဲ့နိုင်ငံတွင်မရရှိနိုင်သည်။ "
► ပြည်သူ့ဝိုင်ဖိုင်များအတွက် Hotspot Shield ကို - သင့်ရဲ့ privacy များအတွက်အပိုကာကွယ်မှုအများပြည်သူ Wi-Fi ဟော့စပေါ့ပေါ်ချိတ်ဆက်နေချိန်တွင်
► တည်နေရာ Spoofer - သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်၌ရှိကြ၏တူသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ application များသင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, သင့်တည်နေရာ spoofing
► အထောက်အထား Theft ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - အခမဲ့ Wi-Fi သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုရှာဖွေနေ, ဟက်ကာများအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ ဟော့စပေါ့ VPN ကိုနှင့်အတူသငျသညျလုံခြုံဖြစ်လိမ့်မည်။
► ရုပ်ဖျက် browsing အတွက် - တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအားဖြင့်ခြေရာခံခံရမှသင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ပါ
► Switch ကိုသတ် - VPN ကိုကနေအဘယ်သူမျှမမတော်တဆကို disconnect ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို server ကိုဆင်းသွားသည်နှင့် IP ပေါက်ကြားဆန့်ကျင်သငျသညျကိုကာကွယ်ပေးသည်လျှင်ပင်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိနေမည်
► အဘယ်သူမျှမ Root လိုအပျ - 21VPN အမြစ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအလုပ်ဖြစ်တယ်
21VPN VIP ကဘာလဲ?
VIP purchasing အသုံးပြုပုံသငျသညျ, ရှိသမျှဆာဗာ access ကိုရပရီမီယံအမြန်နှုန်းနှင့်လျှောက်လွှာထဲကနေအားလုံးကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
သင်တစ်ဦး server ကိုချိတ်ဆက်နှင့်အတူအခက်အခဲများရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာ thru ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ခြင်းသို့မဟုတ် e-mail, contact@21vpn.net မှတဆင့်ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုနှင့်သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုမျှဝေဖို့မမေ့ပါနဲ့။
- တိုးတက်လာသော SSL နှင့် DTLS protocols များ
- လျှော့ချ app ကိုအရွယ်အစား
- မိုင်းနား bugfixes
- VIP ကုန်ပစ္စည်းကြည့်ရှုပြီးနောက် app ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်အပေါ် Fixed ပျက်ကျမှု
21VPN - Unlimited & အခမဲ့ VPN ကို
9.03 ကို MB